एक अर्बभन्दा धेरै एन्ड्रोएड स्मार्टफोनमा ह्याकिंगको खतरा, तपाईँको फोनको अवस्था के छ नी ? - Technology Khabar
» एक अर्बभन्दा धेरै एन्ड्रोएड स्मार्टफोनमा ह्याकिंगको खतरा, तपाईँको फोनको अवस्था के छ नी ?
काठमाडौं । साइबर सेक्योरिटी फर्म ह्विच? (Which ?) ले विश्वभरीका एक अर्बभन्दा धेरै एन्ड्रोएड स्मार्टफोनहरुमा कमजोरी रहेको दाबी गरेको छ । फर्मको अनुसार यि स्मार्टफोनहरुमा सेक्योरिटी अपडेट्स नदिइने हुनाले यि स्मार्टफोनहरु ह्याक हुन सक्ने छ ।
यस साईबर सेक्योरिटी वाच डगले २०१२ वा यसभन्दा पहिले लन्च गरिएका स्मार्टफोन यूजरहरुको लागी यो निकै गम्भिर समस्या भएको बताएको छ । हालसम्म गूगलले यस रिर्पोटमा कुनैपनि बयान सार्वजनिक गरेको छैन ।
यस सेक्योरिटी फर्मले गूगल सहित एन्ड्रोएड स्मार्टफोन कम्पनीहरुमाथी पनि प्रश्न उठाएको छ । यस एजेन्सिले मोबाइल कम्पनीहरु सफ्टवेयर अपडेट लाई लिएर यूजरहरुसँग ट्रान्सपेरेन्ट हुनु आवस्यक रहेको बताएको छ ।
सामान्य रुपमा कुनैपनि कम्पनीको स्मार्टफोन जतिसुकै महंगो भएपनि उक्त कम्पनीले कति वर्ष सम्म यस स्मार्टफोनमा एन्ड्रोएड अपडेट पाइन्छ भन्ने प्रष्ट खुलाएको हुदैन । धेरैजस्ता एन्ड्रोएड स्मार्टफोनहरु दुई देखि तीन वर्ष पछि नै अपडेट दिन बन्द गरिदिने गर्दछन ।
बिबिसी को एक रिर्पोटमा गूगलको डेटा आफैले नै विश्वभरिका ४२.१ प्रतिशत एन्ड्रोएड यूजरहरुसँग एन्ड्रोएड ६.० वा यसभन्दा तलको भर्जन रहेको बताउने उल्लेख गरिएको छ ।
सेक्योरिटी फर्म ह्विच? ले आफ्नो अध्ययनमा विश्वभरिका ५ मध्ये २ एन्ड्रोएड यूजरहरुलाई हाल सेक्योरिटी अपडेटहरु नदिईने पाइएको बताएको छ ।
यसमा पाँच स्मार्टफोनहरुको टेस्टिंग गरिएको छ । यसमा मोटो एक्स, सामसङ ग्यालेक्सी ए५, सोनी एक्सपेरिया जेड२, नेक्सस ५ र सामसङ ग्यालेक्सी एस६ रहेका छन ।
ह्विचले यसलाई चेक गर्नको लागी एन्टि भाइरस ल्याब एभी कम्प्यारिभ्स को सहयोग लिइएको बताएको छ । यस एजेन्सीले पाँचैवटा स्मार्टफोनलाई मालवेयरबाट प्रभावित गर्दा सबै फोनहरुका मालवेयर सजिलै इन्जेक्ट भएको थियो ।
यस सेक्योरिटी फर्मकाले मोबाइल कम्पनीहरुलाई आफ्ना यूजरहरुको सर्पोटको लागी कुनै कमजोरी गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।
बिबिसीको एक रिर्पोटको अनुसार ह्विच? एजेन्सीका कम्प्युटिंग एडिटरले महंगो मोबाइल फोनहरुको लाइफ पनि छोटो हुन अचम्मको कुरा रहेको बताएका छन । उनले यस्ता फोनहरुमा सेक्योरिटी अपडेट्स चाडै नै बन्द हुने र यसै कारणले हाल लाखौँ प्रयोगकर्ताहरु ह्याकिंगको चपेटामा पर्न सक्ने उच्च सम्भावना रहेको पनि जनाएका छन ।
यस्ता स्मार्टफोनहरुमा एन्ड्रोएड सेक्योरिटी अपडेट नपाइने भएकाले यसबाट बच्न उपभोक्ताहरुले एन्ड्रोएड ६ भन्दा माथिको एन्ड्रोएड सर्पोट रहेको स्मार्टफोन किन्नुको विकल्प रहेको देखिदैन ।
यदि यूजरहरुले नयाँ स्मार्टफोन किन्न नचाहेको खण्डमा यस्ता स्मार्टफोनहरुलाई सावधान रहनु पर्दछ । अर्थात जथाभाबी एप्स डाउनलोड गर्नबाट बच्नु पर्ने हुन्छ र कुनैपनि प्रकारको संका रहेको कन्टेन्टहरुमा एक्सेस गर्नबाट जोगिनु पर्दछ । एजेन्सी
ललितपुरमा मोबाइल एक्स्पो, हरेक मोबाइल बिक्रीको रु.१० महाविर पुनको राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रलाई
एन्ड्रोइड फोनका एपहरु क्र्यास हुने समस्या गुगलले समाधान गर्यो
मोबाइल इन्टरनेट स्पीडमा नेपालले छलाङ्ग मार्यो, फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डको गति भने खस्कियो